ikhaya » Okufumaneka » Ukubuyela "kwi-Business-as-Usual" Emva kwe-Digital Leak
Ukubuyela "kwi-Business-as-Usual" Emva kwe-Digital Leak
NguPeter Worrall, uMlawuli weNtengiso kunye noPhando lwe-Fortium Technologies
Uhlobo olusandul 'ukwenziwa kwefayile yedijithali kunye nomxholo we-TV lugxininise kwingxaki yokhuseleko lwe-cyber industry. Uninzi lwamaqumrhu angamaziko ngoku ayazi ukuba i-cyberattacks iyakwenzeka kwaye ukuba imiphumo ingaba yinkxalabo kumgangatho weenkampani kunye nodumo. Sekunjalo, iinkampani ezininzi zihlala ziyazi kakuhle uhlobo lobungozi kunye nendlela yokuphepha ekubeni ngamaxhoba, kuncinci into enokuyenza emva kokuhlaselwa. Ingaba kunokwenzeka ukuba ubuyele "kwi-shishini-njengesiqhelo" xa usujoliswe ku-cybercrime?
Okokuqala, kubalulekile ukuqaphela ukuba ukuvuza akuyiyo into ephambili kwezobuchwepheshe. Kunoko yimiba yoshishino ekufuneka iqwalaselwe kwizinga lebhodi kunye neendleko zokukhusela ngokubhekiselele kuzo kufuneka zihlahlowe ngokufanelekileyo. Ukuvuza kukuhlaselwa kwixabiso leenkampani eziphambili.
Inkampani yePonemon Institute iqulathe ingxelo ebizwa ngokukhawuleza Umva we-Mega Breach: I-Sentiment yabathengi. Ichaza ukuphulwa kwedatha njengoko kuhamba kunye neenkonzo zabathengi abahluphekileyo kunye neentlekele zendalo ngenxa yokulimaza itekisi yenkampani. Iinkampani kwiinkampani zokuzonwabisa zihlala zichitha ixesha elininzi kunye nezibonelelo ekuqinisekiseni ukuba abathengi bazo baneziganeko ezilungileyo kwaye bahamba ubude obude ukuphepha ukuphazamiseka kweentlekele, kodwa ezininzi zeenkampani ezifanayo zibonakala zikhona ebumnyameni ukuba zikhusele izisombululo ze-cyber. Bangaphi abaqashileyo, okanye bafune ukufikelela, ingcali kwintsimi ye-cybersecurity?
Kwamashishini athile, iinkampani zijonga indawo yomntu omnye kwaye ke zinomsebenzi wokunyamekela. Cinga ngumbutho wezinto zokugqoka ezinobumba osebenzisa i-courier ukuhambisa izinto ezixabisa ngaphezu kwemvuzo wenyanga. Kwimashishini ekuphumayo, amaziko ngamanye amaxesha anembopheleleko yempahla yabathengi abanamathuba amaninzi afumanayo ngonyaka. Ezinye iifilimu zivelisa ngaphezu kwe-$ 100M iveki yokuqala ekukhululweni. Imiboniso yee-premium yethelevishini idonsa kwizigidi zababukeli kwaye ngoko ke iirhafu ezinkulu zentengiso.
Umsebenzi wokukhusela iimpahla zabaxhamli-mveliso ngoku umdlalo webhola ohlukeneyo kunye namanyathelo angaphezulu kufuneka athathwe. Ngokomzekelo, kukho ukukhula okukhulu ekukhunjweni kolwimi nakwamanye amazwe, kwaye oku kuye kwandisa inani lamaphuzu okusulela. Ukuba ukuvuza kuqhutyelwa kwicandelo lokubonelela ngokuzonwabisa, umthengisi unokuba noxanduva lwezomnotho kwaye ahlasele umdumo walo, kodwa ngumnikazi womxholo kunye nabathengisi bayo abaya kubandezeleka kwaye kufuneka baxelele ukhuseleko olongezelelweyo olufunekayo. Nangona kunjalo, akuninzi, kubonakala, benza njalo. Uphando olutshanje olwenziwa nguRhulumente waseBrithani lufumene ukuba "iinkampani ezimbalwa (34%) zinemithetho ngokukodwa malunga nokubhaliweyo kwedatha yakho ... Ngaphezu koko, ngelixa amaninzi amashishini abeka imithetho kunye nokulawula kwimibutho yabo, nje kuphela i-13 pesenti ebeka ubuncinci bezinga lokhuseleko lwabaxhasi babo . "
Ukubonelelwa ngemiphumo eyingozi ye-cyberattack, kuyamangalisa ukuba akukho nto eyenziweyo yokwenza utshintsho lwemisebenzi yomsebenzi emva kokuvelisa. Mhlawumbi kungenxa yokuba ezininzi izibonelelo ziinkampani ezincinci kwaye zikholelwa ukuba abahlaseli baya kuhamba ngeentlanzi ezinkulu, kungekhona. Oku kungaphantsi kobutyebi beentengiso. Cinga ukuba nabani na ongakwazi ukufikelela kwiinkcukacha malunga nenkampani esebenzayo kwifilimu ethile kunye neeprojekthi zethelevishini kwi-IMDB. Xa isicaka sivakashele iwebhusayithi yeziko leziko, akafunanga ulwazi ngezixhobo zalo zobuchwepheshe okanye abasebenzi be-superstar. Ukhangele ukujonga into engaphantsi kwefilimu ... ifilimu engabonakaliyo kunye nezinto ze-TV ezisetyenziselwa umhla wokukhutshwa ozayo.
Ukuba kufike ukuvuza, umonakalo obangelwayo ungadlulela ngaphaya kokulahlekelwa kwemali ngokukhawuleza. Iyakuchukumisa ikhono lenkampani ukutsala italente kwikamva. Iingcali zenkwenkwezi zingenakufuna ukujoyina inkampani enegama kunye nobuchule bokukhangela amaprojekti eeprofayili aphakamileyo. Inokuchaphazela ubudlelwane namanye amaqela kwiinkonzo zokubonelela. I-digital digitization iye yenza ukuba iifayili ziguqule izandla ngokuphindaphindiweyo ngokuvelisa kunye neposi. Ukuba inkampani "ishiye i-baton" ingenza abanye bancitshise ukuba bafune ukuba yinxalenye yokutya kwabo kwikamva. Ekuvukeni kwephulo, ukukwazi ukuphilisa kwenkampani kunye nokubuyela kwishishini-njengesiqhelo kuya kuxhomekeka kwindlela esabela ngayo kwingxaki.
Zonke iinkampani zifuna ukuba nolawulo lokuzimela kunye nezicwangciso zokubuyiselwa kweentlekele endaweni. Inkampani ehlaselwe ngabagculi kufuneka ixele izinto ezilungileyo ngexesha elifanelekileyo. Kungaba bubulumko ukufaka i-agency ye-PR ukukunceda ekusekeni isicwangciso. Ukuba intlekele ibetha, inkampani kufuneka iphendule ngokufanelekileyo njengoko abasebenzi bayo baya kuphulaphula, ulayini lokubonelela luya kuphulaphula, kwaye abeendaba baya kuncama!
Iphutha lomntu lidala ukuvuza okukhulu. Inkampani yePWC yophando jikelele ifumene ukuba "i-50% yephulo elibi kakhulu ngonyaka libangelwa yimpazamo yabantu engazange ivele, ukusuka ku-31% kunyaka odlulileyo." Buza nayiphi na ingcali ukufumanisa iqhagamshelwano olubuthathaka kwiziseko zokhuseleko kwenkampani kunye nempendulo Baya kuba ngabantu kuba abantu bayaphambuka. Kodwa ngaphambi kokuba ubeke umnwe kumntu othumelele i-imeyile kumntu ongafanelekanga okanye ukukhuphela ifayile ekhulelwe, khumbula ukuba WONKE wenze iimpazamo ezinjalo. Isisombululo ke ke ukuseka indawo ekhuselekileyo apho ezo mpazamo eziphambili zingenakwenzeka. Umxholo onomdla kufuneka ubhalwe ngefayile ngefayile okanye kwifolda nganye kunye nommkeli we-invidivual, kwiimeko zezo ziganeko ezichazwe ukuvuza okutsha, ngokucacileyo kwakungekho.
Ukuba inkampani yakho ayizange ilandele kwaye ifihlile idatha yayo, ingaba lixhoba le-ransomware. Kwiimeko zonke zakutshanje, abahlaseli baye bakwazi ukukhulula umxholo osebiwe kwi-line ngenxa yesizathu esilula ukuba ayibhalwanga. Ukuba yayibhalwe ngefayile, abahlaseli bebeya kuba nefuthe elincinci lokungena. Ukuba uyaphinda uphakamise impahla ye-media, usenokuba utyunyiwe kwaye unokwenza ubuyisele kwakhona ii-PC kunye nama-Mac. Nangona kunjalo, umxholo wakho webiwe awuyi kufikeleleka kumasela kunye nefa lakho elibaluleke kakhulu liya kukhankanywa-idumela lakho kunye nokuma kwayo kwindawo yoluntu yokutya.
I-Fortium Technologies yinkonzo ekhokelayo yokhuseleko lokuqukethwe kwedijithali kumabonakude kunye nokuzonwabisa kwihlabathi jikelele ekuboneleleni ngezobuchwepheshe obunokunika ukhuphiswano olukhuselekileyo ngaphezu komxholo wabo wedijithali ngaphandle kokunciphisa amandla abasebenzisi bokusebenza kumxholo. Imveliso ye-MediaSeal yefayile ye-encryption ekhuselekileyo ikhusela ngokulawulwa kokufikelela kwifayile okanye kwifolda kunye nommkeli ngamnye. Iifayile ezikhuselweyo zingasebenza ngexesha lokuthumela imveliso nakwezinye i-B2b zokusebenzela ngokuhambisana ngokupheleleyo kwiinkqubo kunye neefayile zeWindows ne-Mac.
Imveliso yokuposa SoftAtHome, MStar, iCES2017 ITeknoloji yeTV	2017-08-25
Previous: Umyili weMifanekiso (i-Freelance)
next: Umyili weMveliso
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso: "Ukubuyela" kwi-Business-as-Usual "Emva kwe-Digital Leak". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/turning-to-business-as-usual-after-a-digital-leak/. Enkosi.